एसईई परीक्षाको तयारी
यस वर्षको माध्यमिक शिक्षा उत्तीर्ण परीक्षा (एसईई) चैत ८ गते देखि सञ्चालन हुँदैछ । परीक्षा नियन्त्रण कार्यालयकाअनुसार नियमित र एक्जाम्प्टेड गरी देशभरबाट ४ लाख ८७ हजार परीक्षार्थी सहभागी हुने प्रारम्भिक अनुमान छ । वर्तमानको विद्यालय संरचनाअनुसार कक्षा १ देखि ८ सम्म आधारभूत र कक्षा ९ देखि १२ सम्म माध्यमिक तह भनी परिभाषित गरेको छ । विगत ८ दशकभन्दा लामो समयदेखि विद्यालय तहको अन्तिम परीक्षाको रूपमा कक्षा १० मा लिइदै आएकोमा एसएलसीलाई एसईईमा रूपान्तरण गरिएको छ । नयाँ व्यवस्थाअनुसार विद्यालय तहको अन्तिम कक्षा १२ मा लिइने परीक्षालाई एसएलसी मानिएको छ । वि.सं. १९९० देखि एसएलसीको रूपमा लिइँदै आएको परीक्षाको नतिजा उत्साहप्रद देखिदैन । वि.सं. १९९८ मा सबैभन्दा बढी ७७.७८ प्रतिशत र वि.सं. २०३८ मा सबभन्दा घटी १६.६८ प्रतिशत परीक्षार्थी उत्तीर्ण भएको देखिन्छ । विगत परीक्षाको विषयगत औसत प्राप्ताङ्क हेर्दा अङ्ग्रेजीमा सबैभन्दा घटी ३३.२४ र सबभन्दा बढी सामाजिकमा ४८.०४ भएको पाइन्छ । यति लामो समयसम्म विद्यार्थीको उपलब्धि स्तर ५० प्रतिशत पनि नपुग्नामा के विद्यार्थी मात्रै दोषी छन् त ? शतप्रतिशत उपलब्धि स्तर पु¥याउन राज्य, अभिभावक, विद्यालय, विद्यार्थी र नागरिक समाज लगायतको भूमिका कस्तो हुनुपर्छ ? निक्र्योल गर्न विलम्ब भइसकेको छ । शिक्षा क्षेत्रमा धेरै अभ्यास र लगानी भए पनि विद्यार्थीको उपलब्धिमा झन् ह्रास आउनु गम्भीर चिन्ताको विषय हो । विद्यार्थीको परीक्षा तयारीलाई अझ सहज र उच्च प्रतिफलमुखी बनाउन निम्न टिप्सले टेवा पु¥याउन सक्छ ।
परीक्षा तयारीको समयमा स्वास्थ्यको बारेमा विशेष चनाखो हुनुपर्छ । स्वस्थकर आहरविहार र सहज परिश्रमको प्रति विशेष ध्यान दिनुपर्दछ । एसइइलाई हाउगुजीको रूपमा नलिई सहज रूपमा आत्मसात गरेर सकरात्मक सोचले परीक्षा दिने मनस्थिति बनाउनुपर्छ । मानसिक एवं शारीरिक क्षमताभन्दा बढी थकान हुने गरी अनिंदोसमेत बसेर लगातार पढ्दा स्मरण शक्तिमा ह्रास आउँछ । शारीरिक तथा मानसिक थकानका कारण आपूmले सोचेजस्तो जाँच दिन पनि सकिन्न । अध्ययन गर्दा पाठ्यपुस्तकको मात्र भर नपरेर पाठ्यक्रमको पनि अध्ययन गर्ने गराउनेतर्फ शिक्षक विद्यार्थीले ध्यान दिनुपर्दछ । किनकि विगतमा कहिलेकाही पाठ्यपुस्तकले नसमेटेको तर पाठ्यक्रममा भएको विषयवस्तुबाट पनि प्रश्न सोधिएका छन् । कठिन महसुस गरिएका विषयलाई अलि बढी महìव दिँदै दैनिक समय तालिका बनाएर सबै विषयलाई समानुपातिक रूपमा नियमित अध्ययन गर्ने र सहपाठीको सानो समूह बनाएर छलफल गरेर पढ्ने बानी बसाल्ने गर्नुपर्छ । साथै विगतका प्रश्नहरूको उत्तर लेख्ने अभ्यास गर्ने र आफ्नो विषय शिक्षकलाई देखाएर आवश्यक सल्लाह लिन अल्छी गर्नुहुन्न र परीक्षा दिन जाँदा मैले राम्रोसँग जाँच दिन्छु र राम्रो नतिजा आउँछ भन्ने दृढ विश्वास एवं उच्च मनोवलकासाथ परीक्षाहलमा प्रवेश गर्नुपर्छ ।
साथै विषयअनुसार आवश्यक सामग्री कलम, पेन्सिल, रुलर, क्यालकुलेटर आदि घरबाट हिँड्नु अगाडि राम्रोसँग चेक जाँच गर्नु पर्दछ । परीक्षा केन्द्रको वस्तुस्थिति र दूरी, घरबाट पुग्न लाग्ने समय र साधनको उपलब्धताबारेमा अवलोकन पहिलै नै गर्दा सहज हुन्छ । प्रवेशपत्र तथा उत्तरपुस्तिकामा लेखिएका निर्देशनहरू परीक्षा शुरु हुनु अगावै पढी पालना गर्नु बुद्धिमानी हुन्छ । प्रश्नले मागेको उत्तर यकिन भए पछि प्रश्नको प्रकृति र अङ्कभार तथा समयलाई मध्यनजर राखी मौलिकता झल्किने गरी बँुदागतरूपमा सफा र शुद्धसँग उत्तर लेख्नुपर्छ । सबै प्रश्नका उत्तरहरू लेखिसकेपछि बचेको अन्तिम समयमा लेखेका उत्तरहरूलाई पुन सरसर्ती पढेर छुटपुट भए सच्याउनुपर्छ ।
एसईईलाई अधिकतम उपलब्धिमूलक बनाउन अभिभावकको पनि उत्तिकै महìव रहन्छ । छोराछोरीलाई अनावश्यक दबाब नदिने, उनीहरूको आहार विहारलाई स्वस्थकर बनाउने, पढ्ने लेख्ने सामग्री तथा बस्ने स्थानको उपयुक्त वातारण बनाई सहजता प्रदान गर्ने एवं उत्साह र ढाढस दिएर मर्यादित रूपमा परीक्षा दिन प्रोत्साहित गर्नु एक असल अभिभावकको जिम्मेवारी भित्र पर्दछ । यस मानेमा एसईई अभिभावकका लागि पनि एक समझदार अभिभावक भए नभएको जाँचिने परीक्षा हो भन्दा अन्यथा नहोला ।
त्यस्तै विद्यालयले विद्यार्थीको रुचि क्षमताअनुसारको विषयको छनोट तथा परीक्षालाई सहजरूपमा सामना गर्नसक्ने योग्यताको विकास गराउनु पर्छ । विद्यार्थीको वैयक्तिक भिन्नता र उसको प्रगतिको गति र क्षमताको आधारमा पठन पाठन र अभ्यासको अवसर प्रदान गर्ने चाँजोपाँजो मिलाउनाले समग्रमा विद्यालयको उपलब्धि उच्च हुने यथार्थता हो । किनकि एसएलसीको नतिजाको आधारमा विद्यालयको स्तर सरकार र समुदायमा कायम हुने भएकोले विद्यालयले आफ्नो हैसियत उच्च राख्ने सुनौलो अवसर पनि हो । तसर्थ आफ्ना विद्यार्थीको उपलब्धि स्तर उच्चतम बनाउन विद्यार्थीका प्रतिभाको अधिकाधिक आविष्कार गरेर परिमार्जन र परिष्कृत गर्दै तिनीहरूको विकास र विस्तार गर्ने खालको विद्यालयमा चित्ताकर्षक शैक्षिक वातावरण बनाउनुपर्छ । विद्यार्थीले विद्यालयमा गुणस्तरीय शैक्षिक वातावरणमा पढ्न पाए नपाएको एकिन गर्ने परीक्षा पनि हो एसईई ।
प्रश्नपत्र निर्माणमा वैज्ञानिकता, वस्तुनिष्ठता तथा गुणस्तरीयताले पनि परीक्षाको नतिजालाई असर पार्छ । व्यवस्थित, मर्यादित, निष्पक्ष, स्वच्छ र सौहाद्र वातावरणमा परीक्षा सञ्चालन गर्न परीक्षा केन्द्र निर्धारण, भौतिक तथा मानवीय व्यवस्थापन एवं उनीहरूले परीक्षार्थीलाई गर्ने व्यवहारबाट परीक्षाको गुणस्तरीयताको निक्र्योल गर्दछ । यसप्रकार एसईई प्रत्यक्ष रूपमा विद्यार्थीका लागि मात्र भएजस्तो लागे पनि परोक्ष रूपमा राज्यले विद्यालय शिक्षासम्बन्धी अख्तियार गरेको, योजना नीति–नियम कार्यव्रmम जाँच्ने कसी पनि हो । त्यस्तै विद्यालय व्यवस्थापन समिति, शिक्षक अभिभावकले विद्यार्थीको पठनपाठनमा कतिको योगदान पु¥याए भन्ने कुराको यकिन गर्ने एक सशक्त सूचक विद्यार्थीले प्राप्त गरेको प्राप्ताङ्क र उत्तीर्ण प्रतिशत नै हो । तसर्थ एसईई विद्यार्थीका लागि मात्र परीक्षा नभएर सम्बन्धित निकाय, विद्यालय, शिक्षक, अभिभावकलगायतको पनि परीक्षा हो ।